Qalabka Falanqaynta Semalt
Sheekooyinka Guusha Semalt
La xiriir Semalt
Marabtaa inaad Google si heer sare ah uga qiimeyso? Semalt.net waa xalka ugu fiican ganacsigaaga. Waxay leedahay aaladaha ugu awooda badan inay ku siiso qiimeynta ugu sareysa Google. Boggu waa mid saaxiibtinimo leh isla markaana aad u dareen badan. Hal aragti, waxaad haysataa waxkasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku guuleysato fartaada.
Qalabka falanqaynta Semalt si fudud ayaa looga heli karaa websaydhka. Waxaad arki doontaa alaabooyinka ay soo bandhigaan, inbadan oo ku saabsan shirkadda waalidka, sheekooyinka guusha iyo xulashooyinka kala duwan ee lagula xiriiri karo. Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad gasho ama aad koonto ku sameysato Semalt.net. Abuurista xisaabtu waxay kaa caawineysaa inaad badbaadiso mashaariicdaada SEO ee Semalt.
SOLALT ANALYSIS TOOLS
Falanqaynta websaydhadu waxay ku lug leedahay ururinta, warbixinta iyo falanqaynta xogta websaydh. Waa geedi socod murugsan oo caawinaya go'aaminta haddii degel uu gaaro yoolalka iyo ujeeddooyinka uu doonayo. Xogta la falanqeeyay, istiraatiijiyado wanaajin loogu talagalay hagaajinta websaydhka ayaa markaa la abuuraa. Qalabka falanqaynta Semalt waa aaladda ugu awoodda badan ee kaa caawineysa inaad sameyso kuwaan iyo kuwa badan.
Qalabka falanqaynta Semalt wuxuu u qaybsan yahay 4 qaybood.
Qeybtaan, waxaad ka heli doontaa aaladaha loo baahan yahay falanqeynta guud ee boggaaga. Qeybta SERP waxay leedahay seddex hoosaad.
a. Furaha furaha ee TOP: Halkan waxaad ku arki doontaa tirada ereyada furaha ah ee shabakadaada ee kujira natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee Google TOP 1-100 marka loo eego taariikh hore. Waxaad sidoo kale arki doontaa shax muujinaya tirada ereyada muhiimka ah ee Google TOP waqti ka dib. Qalabkaan, waxaad ka eegi kartaa isbedelada ku jira tirada ereyada muhiimka ah ee websaydhkaagu u dhexeeyo TOP. Ugu dambeyntiina, waad ka arki kartaa bogagga kujira websaydhka iyo boosaskooda SERP eray fure gaar ah leh.
b. Bogagga ugufiican: Halkan, waxaa lagu siin doonaa faham ku saabsan bogagga ugu wanaagsan ee abuuri kara taraafikada. Waxaad ka heli doontaa shax muujinaya isbeddelada tirada bogagga websaydhada TOP tan iyo markii la bilaabay mashruucaaga ilaa iyo maanta. Waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad ogaato tirada bogagga shabakadda ee Google TOP 1-100 natiijooyinka raadinta dabiiciga ah, marka loo eego taariikh hore. Waxa kale oo aad u arki kartaa shax shax ah oo ka soo horjeedda tirooyinka caadiga ah ee kooban. Waxaa jira jaantus kale oo aan kuu oggahayno inaad ku ogaato isbeddelka tirada ereyada muhiimka ah ee boggaga xulashadaada ah ee loo soo xulay TOP laga bilaabo taariikhda la bilaabay bogaggaaga.
c. Tartan: Semalt wuxuu ku siinayaa fahamka bogagga internetka ee tartamayaashaada si aad wax uga baratid iyaga isla markaana aad ula qabsato qorshahaaga ganacsi ee hadda socda. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad hesho dhammaan shabakadaha ku qiimeeya Google TOP 1-100 ee ereyada muhiimka ah ee lamid ah kuwa ay websaydhkaagu ku jiraan. Waxaa sidoo kale lagu tusi doonaa booska uu bartaada internetku ka dhexeyso tartamayaashaada. Waxaa lagu siin doonaa fahamka tirada guud ee ereyada muhiimka ah ee la wadaago ee ay tartameyaashu xulanayaan ku leeyihiin TOP. Waxa kale oo aad ka heli doontaa miis meesha aad ku arki karto tirada ereyga muhiimka ah ee la wadaago ee websaydhkaaga iyo tartamayaashaada ku qiimeeya Google TOP. Shaxdan, raadinta farqiga u dhexeeya tirada ereyada muhiimka ah ee la wadaago iyada oo laga soo horjeedo taariikh hore waxay noqotaa mid fudud.
Waa kuu muhiim adiga inaad ogaatid bal in Google u tixgeliyo boggaaga gaarka ah iyo in kale. Qof kale ayaa laga yaabaa inuu nuqul ka sameystay boggaaga shabakadda oo haddii ay iyagu ka muuqdaan si ka dhakhsi badan kanaga, Google uu calaamadayn doono websaydhkaaga si khafiif ah wuxuuna calaamadayn doonaa kan ugu horreeya ee nuxurka. Waxaad u baahan doontaa inaad la socoto tan sababta oo ah Google ayaa ciqaabaysa bogag ay ku jiraan tiro fara badan oo nuqul ka kooban. Halkan waxaad ka ogaan doontaa in Google uu ula dhaqmo websaydhka sidii il gaar ah iyo in kale. Semalt.net waxay awood kuu siineysaa inaad aragto qiimeynta boqolka mid ahaantaada si ay kaaga caawiso inaad ogaato haddii bartaada internetka loo tixgeliyo mid gaar ah ama haddii kale. Dhibcaha 0-50% waa wax aadan dooneynin inaad lahaato - tan micnaheedu waxaa weeye Google ayaa u tixgelisa shabakadaada inay tahay nuqul. Qiimaynta 51% -80% waxay ka dhigan tahay Google inuu u maleeyo boggaaga inuu ugu fiican yahay wax ku qori karo. Tani waa celcelis dhibco laakiin Semalt ayaa kaa caawin kara inaad sida ugu fiican wax u qabatid. Dhibcaha 81% -100% waa tilmaame wanaagsan oo muujinaya inaad wax uun ku qabatid halkan. Google waxay u tixgalineysaa waxyaabahaaga mid gaar ah. Tani waxay si weyn u wanaajineysaa darajadaada.
Waxaad ka heli doontaa aalad "wax ka kooban" oo kaa caawinaysa inaad aragto dhammaan waxyaabaha ay Google ku aragto boggaaga. Waxay sidoo kale iftiimineysaa qaybaha nuqul ka mid ah waxyaabaha ka kooban boggaaga.
Qalab kale oo aad ka heli karto anfici waa “il asalka asalka ah” oo soo jiita dhammaan bogagga ay Google u aragto ilaha aasaasiga ah ee nuxurka boggaaga. Waxay xitaa ku tusi kartaa qaybta saxda ah ee ka kooban waxyaabahaaga oo laga helo websaydhada kale sidaa darteed waad u fiirsan kartaa meelahaas si aad u wanaajiso qiimeynta midnimadaada. Semalt wuxuu leeyahay koox qoraayaal xirfadlayaal ah oo kaa caawin kara inaad ka dhigto boggaaga shabakada sida ugu macquulsan uguna macquulsan. Si fudud ayaa loogala xiriiri karaa semalt.net.
Maamulayaasha shabakada Google
Markaad gasho koontadaada Google, waxaad marin u yeelan doontaa aaladda webmasters Google. Qaybtan, waxaad ku arki doontaa sida shabakadaadu ugu muuqato natiijooyinka raadinta Google. Waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato arrimaha tilmaanta. Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad gudbiso boggagaaga iyo boggaga shabakadda sidii liistada oo dhan oo aad weydiisatid tilmaanta Google.
Waxaad sidoo kale marin u yeelan doontaa cabirro muujinaya waxtarka websaydhkaaga. Tani waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo ogaan lahaa waxaad sax u tahay iyo waxyaabaha aad qaladka sameyneyso ee ka hor istaagaya in boggaagu lagu meeleeyo Google TOP 1-100.
Qalabka bogga ayaa kuu oggolaanaya inaad u soo gudbiso boggaaga mareegtada bogga Google si aad u barato waxa loo yaqaan 'sitemaps' ee la tilmaamay iyo kuwa qaladka ku jira.
Falanqaynta xawaaraha bogga ayaa ah aalad awood badan oo soo bandhigaysa waqtiga culeyska boggaaga, tirada tirakoobka guuleysta ee aad haysato iyo tirada khaladaadka si loo hagaajiyo. Qalabkani wuxuu ku siinayaa dhibco boqolkiiba labada desktop-ka iyo noocyada mobilada ee boggaaga. Xawaaraha rarka ee degelkaaga ayaa saameyn ku leh darajadaada, sidaa darteed qalabkani waa mid qiimo leh.
Dhibcaha 0-49 waxay muujineysaa xawaare aad u gaabis ah. Dhibcaha 50-89 waxay muujineysaa xawaaraha dhexdhexaadka ah ee dhibcaha sare ee 90-100 waxay muujineysaa xawaare fiican.
Semalt wuxuu sidoo kale ku siinayaa fahanka sida user-saaxiibtinimada websaydhkaagu u dejisto nidaamka rarka ee biraawsarka mashiinka desktop iyo biraawsarka mobiilka. Tani waxay kaa caawineysaa inaad ku tusto sida aan ugu wanaajineynno boggaaga shabakadda inuu yahay kor u qaadista Google SERP.
Markii aad gasho koontadaada, waxaa lagu geyn doonaa meesha aad ku taal 'dashboard' halkaas oo aad kaheli doonto ikhtiyaarro aad ku isticmaasho shaandhaynta si aad u hesho mashaariicda aad u baahan tahay oo aad u hesho xogta hadda. Waad ku abuuri kartaan mashaariicdaada adigoo ku dar jeex jeexan Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay inaad mashaariicdaada ku kala saarto qaabab kala duwan si aad ula socoto horumarka bogaggaaga internetka.
Semalt wuxuu soosaaraa alaabada ugu fiican kor u qaadistaada SEO. Alaabada la taxay waxaa ka mid ah:
AutoSEO: Tani waxay kaa caawineysaa inaad si wanaagsan u kobciso shabakadda, waxay wanaajisaa aragtida websaydhkaaga, waxay gacan ka geysaneysaa soo jiidashada booqdayaasha cusub waxayna kordhisaa joogitaankaaga ganacsiga ee internetka. Adeegyada AutoSEO ee Semalt ay bixiso waa kan labaad midnaba.
SEO oo dhammaystiran: Iyadoo leh SEO oo dhammaystiran, Semalt wuxuu ku siinayaa kobcinta websaydhada wanaagsan, oo ah ROI wanaagsan, waxay kaa caawineysaa inaad maalgashto mustaqbalkaaga si xikmad leh waxayna ku siineysaa natiijooyin dhakhso leh, waxtar leh iyo waqti dheer. Waxaa laguugu qori karaa mid ka mid ah boggaga Google TOP 100 marka aad bilaabayso olole SEO dhan ah oo aad la leedahay Semalt.
E-commerce SEO: Ma ka heli doontid olole SEO ka fiican oo loogu talagalay websaydhkaaga E-commerce marka loo eego Semalt's E-commerce SEO. Semalt adiga ayey kuu qabataa shaqada - waxay u keenaan macaamiisha runtii! Waxay gacan ka geystaan kobcinta weydiimahaaga ereyga-gaaban ee jumladaha si ay u kordhiyaan aragtida booqdayaasha, waxay ku siinayaan falanqayn aad u fiican waxaadna bixinaysaa kaliya natiijooyinka.
Falanqaynta: Qalabka falanqaynta ee websaydhka Semalt ayaa ka caawiya inaad la socoto suuqaaga, daba-galka jagooyinka tartamayaashaaga ee laxiriira kuwaaga isla markaana waxay soo bandhigaan macluumaad ganacsi oo guud oo tafatiran. Waxaad sidoo kale ogaan doontaa suuqyo cusub. Waxay xitaa kaa caawinayaan inaad u bedesho xogtaada qaab PDF iyo qaabab EXCEL ah - keydiyaha nolosha!
SSL: Semalt wuxuu siiyaa badbaado shabakadahaaga. Tani waxay xaqiijineysaa ilaalinta asturnaanta ee isticmaaleyaashaada sidoo kale. Waxaad ka heli doontaa soo-booqdeyaal badan oo Google ah Google Chrome ayaa ku siin doonta khad cagaaran.
Kadib markaan dib u eegis ku sameynno aaladda iyo badeecada Semalt.net, waxaan helnaa inaan la kulano Semalt heerar qoto dheer.
Halkan waxaad ka arki doontaa koox hufan oo khubaro ah iyo xitaa inaad aragti ka hesho goobtooda shaqo.
Badeecada Semalt waa kuwo aad u qiimo jaban sababtoo ah waxay runtii rabaan in ganacsigaagu guuleysto. Waxaa jira qorshe kuu socda haddii aad rabto inaad adeegyadooda adeegsato bil kasta, 3 bilood kasta, 6 bilood ama sannad kasta.
Macaamiisha farxadda leh ee Semalt waxay si xiisa leh uga tagayaan dib u eegista sicirka sarrifka sare ee ay lahaan jireen tan iyo markii ay ku wareejiyeen ganacsigooda gacan aamin ah Semalt.
Semalt blog-ka ayaa loo heli karaa qof kasta oo u baahan macluumaad qiimo leh oo ku saabsan SEO laga bilaabo aasaaska illaa wararkii ugu dambeeyay ee warshadaha.
Xarunta caawimaadda ee Semalt, waxaad ka heli kartaa caawimaad haddii aad xayiran tahay.
Ma waxaad dooneysaa inaad xoogaa lacag ah sameyso? Semalt wuxuu kugu daboolay barnaamijka iibiyahooda marka aad dib u soo celiso adeegyadoodii SEO ee ugu sareeyay.
XUQUUQAHA QALBIGA SEMALT
Waxaad ka heli kartaa wax ka badan 5000 boggag kuwaas oo si guul leh ugu mahadnaqay Semalt. Miyaad u malaynayn inay tahay waqtigii ay shabakadaadu liiska ugu jirtay iyana?
KU SAMEE TUUGAHA SIFALT
Semalt waa bulsho. Waxaad kula xiriiri kartaa warbaahinta bulshada, emayl ahaan iyo sidoo kale khadka tooska ah ayaa laga heli karaa sidoo kale. Waxa kale oo aad ku ridi kartaa cinwaankooda jireed haddii aad ku sugan tahay xaafada.
Midna ma dafiri karo xaqiiqada ah in Semalt uu si weyn ugu heellan yahay guuleysiga macaamiishooda howlo badan oo qalab ah oo ay bixiyeen. Semalt ayaa runtii ah gogol xareedka xalalka wax kasta oo la xidhiidha SEO. Ganacsigaagu runti wuxuu ku jiraa gacmaha aamin ah.